सरकार ! लकडाउनको विकल्प सोच, रोगको त्रा’सभन्दा भोकको ज्वाला खत’रनाक हुन्छ! – PathivaraOnline
Home > विचार > सरकार ! लकडाउनको विकल्प सोच, रोगको त्रा’सभन्दा भोकको ज्वाला खत’रनाक हुन्छ!
admin May 31, 2020 विचार, समाचार 0
श्वेता खड्का नायिका ।
चीनको बुहानबाट सुरु भएको कोरोना (कोभिड १९) को महामारीका कारण आजका दिनसम्म ६० लाख ५० हजारभन्दा बढी संक्रमितको पहिचान भइसकेको छ भने ३ लाख ६७ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालमा हालसम्म १४ सय जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि हुनुका साथै ७ जनाको मृ’त्यू भएको छ । यो संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।
मानिसबाट मानिसमा तिब्ररुपले सर्ने कोरोनाको संक्रमणलाई रोक्न अन्य मुलुकले झै हाम्रो मुलुकमा पनि गत चैत्र ११ गतेदेखी लकडाउनको घोषणा गरियो, जुन आज ६९ औ दिनसम्म पनि जारी छ । सामाजिक दुरीलाई कायम गर्दै गृहबन्दीको कहालीलाग्दो अवस्थामा ’बिचरो’ जीवन जिउँदै आएका छौं हामी । ‘लकडाउनको यो अवस्था कहिलेसम्म ?’ हामी सबैको मनमा उब्जिने साझा प्रश्न वा जिज्ञासा यही नै हो । तर यकीन जवाफ कसैसँग छैन ।
मेरो बुझाईमा, हाल विश्वका अधिकांस मुलिकहरुले अंगिकार गरेको लकडाउनको रणनीती भनेको कोरोनाको सम्भावित खतरालाई पछि धकेल्ने एउटा अस्थाई उपाय मात्र हो । यसले स्थायी समाधान दिन सक्दैन । दक्षिण कोरियाले पूर्ण लकडाउन भन्दा सामाजिक तथा भौतिक दुरी व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिएको थियो । उसले यही रणनीतिबाट कोरोनाको संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो ।
रोगको त्रा’सभन्दा भोकको ज्वाला खतर’नाक हुन्छ । त्यसैले कोरोना रोकथामको अस्थायी उपायको रुपमा अबलम्बन गरिएको लकडाउनमाथि पुनर्बिचार गर्न तत्पर नहुने हो भने भोलिको स्थिति भया’वह हुने देखिन्छ ।
यतिखेर सबैको भरोसा सरकारमाथि अडिएको छ । सरकारले आठौं पटक लकडाउनको अवधि थपेर जेठ ३२ गतेसम्म पुर्‍याएको छ । लकडाउनको अन्त्यका लागि वैकल्पिक उपायहरु सरकारले केही पनि अघि सारेको छैन । अतः हाम्रो यो आशा निराशामा परिणत भइरहेको छ।